Heshiisyadii La Dhamaystiray Saacadihii La Soo Dhaafay, Wiil Soomaali Ah Oo Serie A Laga Fasaxay Iyo Wararkii Suuqa Ugu Danbeeyay Ee Ay Caawa Wargaysyadu Qoreen. - Gool24.Net
Heshiisyadii La Dhamaystiray Saacadihii La Soo Dhaafay, Wiil Soomaali Ah Oo Serie A Laga Fasaxay Iyo Wararkii Suuqa Ugu Danbeeyay Ee Ay Caawa Wargaysyadu Qoreen.
DEG-DEG: Sky Sports ayaa hadda shaaciyay in wada hadalo heer sare ahi ay dhex mareen kooxaha Manchester United iyo Newcastle United ee qorshaha United ku doonayso saxiixa Sean Longstaff.
DEG-DEG: Shaki wayn ayaa ku xeeran suurtogalnimada ay Arsenal awood dhaqaale ugu leedahay in ay la soo saxiixi karto Wilfried Zaha oo Crystal Palace ka tirsan iyada oo hore looga soo diiday dalab 40 milyan gini ahaa wuxuuna hadda Sky Sports sheegay in uu sii xoogaystay shakiga laga qabo in Gunners ay awood u yeelan karto ay kula soo wareegto Zaha.
RASMI: Kooxda Lazio ayaa iska fasaxday afar ciyaaryahan oo uu ku jiro xiddig Soomaali ah oo dhalasho ka heysta wadanka Finland Abukar Mohamed. Xiddiga khadka dhexe ee 20 jirka ah ayaa waxaa liiska ciyaartoyda ay kooxda Talyaaniga iska fasaxday kula wehliya Luca Germoni, Giorgio Spizzichino iyo Lorenzo Filippini
RASMI: Liverpool ayaa heshiis waqti dheer ah ku abaal marisay xidigii kooxdeeda dhibaatadii UEFA Champions League kala soo dabaashay ee Divock Origi kaas oo mustaqbalkiisa waqtiga dheer u hibeeyay Anfield.
RASMI: Agaasimaha kooxda Inter Milan Marotta ayaa cadeeyay in midkoodna Mauro Icardi ama Nainggolan inaysan qeyb ka aheyn qorshaha xilli ciyaareedka soo socda ee kooxda, sidaasi darteed waxa ay baxayaan xagaagan iyadoo Nainggolan la filayo inuu heshiis amaah ah oo 9 milyan euro ugu wareego Shiinaha.
RASMI: Kooxda Fenerbahce ayaa warbixin rasmi ah oo ay soo saartay waxa ay ku beenisay inay la wareegayaan xiddiga khadka dhexe ee Arsenal Mesut Ozil iyadoo saxaafada Turkiga ay beryahaan qoreysay warkaan.
Manchester United ayaa isku diyaarineysa inay heshato Alexis Sanchez xilli ciyaareedka soo socda madaama ay waayeen koob iibsata weeraryahanka reer Chile kaasoo ku faraxsan inuu qaato mushaharkiisa qaaliga ah ee 505 kun ginni isbuucii xitaa haddii uu kursiga keydka fariisto. (Manchester Evening News)
Mario Lemina oo loo arko bedelka Paul Pogba ee Man United ayaa xaqiijiyay inuusan dooneynin inuu sii ahaado ciyaaryahan Southampton ah xilli ciyaareedka soo socda, xilli Man United ay durbaba xiriir la sameysay The Saints. (Manchester Evening News)
Madaxweynaha kooxda rer Brazil Gremio ayaa sheegay in weeraryahanka reer Brazil Everton in kaliya lagu iibin doono lacag rikoor u ah kooxda iyadoo Manchester City lala xiriiriyay weeraryahanka. (Manchester Evening News)
Xiddiga Liverpool Roberto Firmino ayaa xaflad qaaska ah waxa ay isku arkeen kubadsameeyihii hore ee Reds Philippe Coutinho iyadoo xiddiga reer Brazil lala xiriirinayo inuu si lama filaan ah ugu soo noqdo Anfield. (Liverpool Echo)
Kooxda AC Milan ayaa xiiseyneysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee doonaya inuu ka tago Arsenal Krystian Bielik. (London Evening Standard)
Alexis Sanchez ayaa ogolaaday inuu qandaraas cusub u saxiixo Arsenal ka hor inta uusan ka bixin daqiiqadii ugu danbeysay markii uu maqlay inay xiiseynayaan kooxaha Manchester isagoo markii danbe ku biiray United, sida uu sheegay ninkii suuqa kala iibsiga u qaabilsanaan jiray Gunners Dick Law. (London Evening Standard)
Weeraryahanka Juventus Mario Mandzukic ayaa ku laaban kara horyaalka Bundesliga gaar ahaan kooxda Bayern Munich iyadoo loo arko inuu tartan la gelin karo weeraryahanka reer Poland Robert Lewandowski. (Bild)
Nin reer Brazil ah horena ugu soo ciyaaray Barcelona ayaa ka tagay PSG mana ahan Neymar. Thiago Motta ayaa iska casilay shaqadii tababarka ee kooxda PSG ee da’dooda ka hooseyso 19 ka dib hal xilli ciyaareed oo uu shaqadaas hayay. (Marca)
Manchester City ayaa weli xiiseyneysa saxixia Joao Cancelo, waxaana ay dalab gaaraya 55 milyan euro u gudbiyeen kooxda Juventus, waana lacag ay ku qanci karto kooxda lagu naaneeso Vechhia Signora. (Gazzetta dello Sport)